Nootropics PRL-8-53: Meziwanye ebe nchekwa na ikike ịmụ ihe?
The mama nke PRL-8-53 dị ka ọgwụ psychoactive metụtara azụ n'oge 1970s. Nikolaus Hansl, onye prọfesọ na Mahadum Creighton, chọpụtara na ọ bụ nootropic ka ọ na-arụ ọrụ na aminoethyl meta benzoic acid esters.
Kemgbe ọ malitere, mgbakwunye a agbanweela otu usoro mmụta doro anya na nnwale mmadụ. Nchọpụta ahụike bụ ihe kachasị egosi na PRL-8-53 maka ịmụ ihe na-eme ka ncheta oge dị mkpirikpi na okwu ire okwu dị mma.
PRL-8-53 anatabeghị nkwado FDA, mana ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye na US. Nwere ike ịmepụta PRL-8-53 kpam kpam dịka ọgwụ na-enweghị ọgwụ.
Kedu ihe bụ PRL-8-53?
PRL-8-53 bụ ihe na-ewepụta benzoic acid na benzylamine. Na sayensị, a maara ya dị ka 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Kemgbe afọ ndị 1970, PRL-8-53 abụwo ọnụma niile dịka ọgwụ na-emetụta uche maka ịkwalite ọrụ ụbụrụ. Ma ọ dịkarịa ala, enwere ọnwụnwa mmadụ na-aga nke ọma nke na-akwado arụmọrụ ya. E wezụga nke ahụ, PRL-8-53 nyocha na Reddit kwadoro nrụpụta nke mgbakwunye a iji meziwanye ebe nchekwa na mmụta.
Prọfesọ Hansl chọpụtara na nke mbụ ahụ PRL-8-53 nootropic mee ka ncheta oge dị mkpirikpi na ncheta okwu dị mma. Agbanyeghị, ọgwụ a na - egbochi ịda mba, nrụgide, nchekasị na ike ọgwụgwụ.
N'ihi nchọpụta ezughi oke na PRL-8-53, usoro usoro ya si dị bụ ihe omimi. Agbanyeghị, ndị sayensị chere na ọgwụ a na - eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ n'ụzọ atọ.
PRL-8-53 nootropic na-eme ka ihe nzuzo nke acetylcholine, nke bụ isi na-ahụ maka ntanetị, na-ahụ maka ịrụ ọrụ nchekwa na mmụta.
Ọgwụ a na-emetụta ụbụrụ na-arụkwa ọrụ na usoro dopaminergic site na ịmegharị ogo dopamine dị mma. Ihe bụ ihe ọzọ, na-ewere Nsogbu PRL-8-53 ọgwụ ga - egbochi mmepụta nke serotonin. Mmetụta a na-eme ka nrụgide dị elu iji jikwaa nchekasị, mgbanwe ọnọdụ, na ehighị ụra.
Uru nke PRL-8-53
Enwekwu ikike ịmụ ihe
Ngwunye PRL-8-53 gosipụtara iji melite cognition na ikike ịmụ ihe. Ihe mgbakwunye ahụ na-ebute icheta ozi, okwu na echiche dị iche iche. Yabụ, ọ bụrụla ọgwụ ọgwụ na-ekpo ọkụ n'etiti ụmụ akwụkwọ chọrọ ịba ụgbọ mmiri site na ule siri ike.
PRL-8-53 maka ịmụ akwụkwọ nwekwara ike melite elekwasị anya, ọkachasị mgbe ị na-achọ ịghọta echiche ọhụrụ. Fọdụ psychonauts na-ekwu na ị thisụ ọ smartụ thisụ ọgwụ a mara mma na-eme ka ị nọgide na-aga, ọ ga-esiri gị ike ịdọgbu onwe gị mgbe ị na-akọwa ihe ọhụrụ. Ihe ndị a PRL-8-53 nwere ike ịbụ ọhụụ ọhụụ maka ndị ụbụrụ na-eche nche bụ ndị na-agbanye maka ụfọdụ ule nyocha fisiks dị mgbagwoju anya ma ọ bụ nyocha ọnụ na-adịghị mma.
Otu n'ime nsogbu PRL-8-53 bụ isi na-agụnye mmelite ncheta. Nootropic na-arụ ọrụ acetylcholine na usoro dopaminergic, nke dị oké mkpa maka cognition.
N'okwu ikpe ahụ metụtara 47 gbasara ahụike, prọfesọ Hansl kwuru na ndị were PRL-8-53 mere nke ọma na ule ncheta karịa ndị sonyere na placebo. E wezụga nke a, ncheta a nwere ike ịdịru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu.
Tupu ya anwaa mmadụ, Hansl achọpụtala na PRL-8-53 na-erite uru oke oke. Mgbakwunye ahụ na-eme ụdị ihe atụ maka icheta ma jikọta nzaghachi na ọnọdụ nrụgide.
Imezi Mkpali ma Na-ebelata Ike ọgwụgwụ
PRL-8-53 ọgwụ ịda mbà na-egosipụta njirimara dopaminergic. Lọ ọrụ ahụ na-eme ka ọrụ dopamine, ụbụrụ na-emetụta ụbụrụ na-akpali mkpali, na-eme ka ọnọdụ dịkwuo elu, ma na-ebelata ike ọgwụgwụ. Yabụ, ọ na - akwalite ahụike nke uche, enwere ike ịlụso nsogbu uche ọgụ dị ka ADHD na isi okike.
N'agbanyeghị ezigbo mmetụta PRL-8-53, ịkwesighi iji nootropic dị ka sub maka ọgwụ ọgwụ gị. Emebere ogige a maka ebumnuche ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọrịa.
Esi ewe PRL-8-53?
Ndị na-ahụkarị Ngwakọta PRL-8-53 ihe dika 5mg kwa ubochi, ewere ya dika mmeghari onu. Ọ bụ ezie na enweghi oke nyocha iji guzobe usoro ọgwụ kachasị nchebe, nnwale mbụ nke mmadụ jiri 5mg mee ihe. Ntughari site na nyocha nke PRL-8-53 na-egosi na ụfọdụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ewere ihe dịka 10mg na 20mg nke mgbakwunye ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-enye mgbakwunye ahụ maka ncheta oge dị mkpirikpi, dịka mgbe ị na-anwale ule, hụ na ị jiri ya awa abụọ tupu emega ahụ.
PRL-8-53 nootropic dị na ntụ ntụ, pill, na ụdị mmiri. Nwere ike ịhọrọ ilo ma ọ bụ tinye ya na ihe ọ drinkụ yourụ gị; nke ọ bụla dịịrị gị mma. Agbanyeghị ị nwere ike ịhọrọ maka nchịkwa sublingual, usoro a nwere ike ị gụ gị ire. Imirikiti ndị ọrụ ga-ahọrọ iji ọnụ were PRL-8-53.
Ka ọ dị ugbu a, enweghị ezigbo nkwanye ngwugwu PRL-8-53. Enwere ike imekọrịta mmekọrịta nke onyinye a na ọgwụ ndị ọzọ na-emetụta uche. E wezụga nke ahụ, PRL-8-53 nwere ikike dị elu, yabụ, ọ dịghị mkpa ijikọta ya na ndị ọzọ nootropics na-eme ka ncheta.
Anyị anaghị atụ aro ma ọ bụ kwado ọ bụla Mkpokọta PRL-8-53. Ma ọ dịkarịa ala, ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ị gaghị anwa anwa iji ọgwụ ọjọọ nwere ụdị mmetụta a. N'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị a siri ike, ụfọdụ ndị ọrụ n'ime obodo psychonautic na-ekwupụta na ịkwado ntụ ntụ PRL-8-53 na Alpha-GPC, piracetam, IDRA-21, na theanine na-enye ha nnukwu ọgwụgwọ ọgwụgwọ.
Enwere mmetụta ọ bụla nke PRL-8-53?
Ruo ugbu a, ọ nweghị mmetụta mmetụta PRL-8-53 edere. Naanị ihe ndị dịnụ dị na 1970s n'oge nyocha ahụike na nke doro anya nke nootropic. N'ime ọmụmụ ihe mmadụ, ndị sonyere ahụ egosighi mgbaàmà na-adịghị mma na ọgwụ nke 5mg kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na enweghị mmetụta ahụike PRL-8-53 na-enweghị ọgwụgwọ na ndekọ, jide n'aka na ị ga-ejikwa obere doses. Dika nyocha nke oke, ihe di elu nke mmeju a na emebi nsogbu.
Ndị Ọrụ Ahụmahụ
E nwere imerime onye ọrụ ahụmahụ na Reddit na Amazon ụlọ ahịa banyere mmetụta nke Nchegbu PRL-8-53 nootropic.
Lelee ụfọdụ nyocha PRL-8-53;
Mmụta na ebe nchekwa mma
“Ana m eji PRL-8-53 mara nke ọma oge ọ bụla m nwere okwu nkuzi n’isi. Ọ na-enwe nnukwu ọdịiche n'otú m ga-esi buo ihe anyị n'isi. ”
Achọpụtala m ịsụ asụsụ PRL nke ọma. Ejikọtara ya na caffeine, ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ ọmụmụ. ”
Amalitere m iji obere ọgwụ dochie ya ma buruo ibu. O doro m anya na 10mg bụ ọgwụ dị ukwuu kwa ụbọchị… Agbanyeghị, ekpebiri m ịnwale 20mg na Fraịde maka ule Neuroscience m wee ju m anya site na nkwalite ncheta… Echere m na nnukwu ọgwụ ndị ahụ nyeere aka na-echeta ma bụrụ nnukwu enyemaka maka ule . ”
"Ana m a itụ ya n'ụtụtụ mgbe m tetara n'ụtụtụ (11am) na Noopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, na tianeptine
“Ana m eme IDRA-21 na PRL-8-53 ugbu a kwa ụbọchị. Ngwakọta ahụ na-amasị m, ọ na-emekwa ka iburu ihe n'isi na ịghọta ihe ọhụrụ dị mfe karị. ”
“Dị ka ọ ka ọtụtụ n'ime ndị na-asụ asịrị, ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Otú ọ dị, ọ dịghị njọ dị ka Noopept… ọ ga-emekwa ka ire gị maa jijiji nke ọma oge ole na ole mbụ… Uru ya karịrị ụtọ ya. ”
Ahụ́ ka m na-echetakwu ihe mgbe ihe ndị ahụ mechara m ka o metụrụ m n'ahụ́. Mgbe m gachara nke ikpeazụ, enwere m mmetụta a na-apụghị ịkọwa akọwa, ọ dịtụchaghị ahụ iru ala. ”
Onye ọrụ na-amaghị aha kwuru;
"Na onunu ogwu n'elu 30mg ọnụ na 15mg sublingually, enwere m isi ọwụwa na mmetụta dị egwu banyere ọhụụ m."
Ngwurugwu PRL-8-53 bụ ihe na-ekwe nkwa nootropic nke na-apụtabeghị na mpaghara sayensị. Naanị ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ nke ịdị irè ya dị afọ iri ise. Agbanyeghị, ndị neurohackers nwere ịnụ ọkụ n'obi na-echekwa ego dị ka ihe nkwalite ikike nchekwa nwere obere mmetụta PRL-8-53.
Ihe mgbakwunye dị mma maka ncheta oge dị mkpirikpi. Ihe omuma ndi anakọtara site n'aka ndi oru nwere ihe omuma na ihe omumu omumu a choputara Nchegbu PRL-8-53 ọgwụ ga - eme ka ncheta dịkwuo mma ruo ihe dịka 200%.
Mmekọrịta nke nootropic a na ọgwụ ndị ọzọ ka bụ ihe omimi. Ya mere, amaghi nchekwa ya na amaghi ya. Yabụ, ịnwale nchịkọta PRL-8-53 abụghị nhọrọ. Gaa dọkịta gị tupu ịre ọgwụ PRL-8-53 yana ọgwụ ọgwụ ndị ọzọ.
Nwere ike ịme PRL-8-53 ịzụta na ntụ ntụ ma ọ bụ ụdị pill dị ka mgbakwunye nootropic.
Hansl, NR, na Mead, BT (1978). PRL-8-53: Mmụta ka mma na njigide na-esote mmadụ n'ime nsonaazụ nke ụbụrụ psychotropic ọhụrụ. Psychopharmacology (Berl).
Hansl, NR (1974). Akwụkwọ akụkọ spasmolytic na CNS na-arụsi ọrụ ike: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride.
McGaugh, JL, na Petrinovich, LF (1965). Mmetụta nke ọgwụ ọjọọ na mmụta na ebe nchekwa. Nyocha International nke Neurobiology.
Kornetsky, C., Williams, JE, & Bird, M. (1990). Ntị na mkpali na-akpali nke ọgwụ ndị na-emetụta uche. NIDA Nyocha monograph.
Giurgea, C. (1972). Nkà ọgwụ na-arụ ọrụ nke ụbụrụ. Agbalị n'echiche nootropic na psychopharmacology. Ezigbo Pharmacol (Paris).
Hindmarch, I. (1980). Ọrụ Psychomotor na ọgwụ psychoactive. Akwụkwọ akụkọ British Journal of Clinical Pharmacology.
IKWU PRL-8-53 (51352-87-5)
Nyocha 1 PRL-8-53
2.Gịnị bụ PRL-8-53?
3.PRL-8-53 usoro ihe
4. Uru nke PRL-8-53
5.Etu esi ewere PRL-8-53?
7. Enwere mmetụta ọ bụla nke PRL-8-53?
8. Ahụmahụ Ndị Ọrụ